ဆီတင်သင်္ဘောတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက် အမေရိကန်က အီရန်အားပြစ်တင် ၊ လက်တုံ့ပြန်ရန် ပြင်ဆင်နေဟု ဆို - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကန်က ကူဝိတ်နိုင်ငံ ကူဝိတ်စီးတီးမြို့၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ ဩဂုတ် ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်အာရေဗီယံပင်လယ်ထဲတွင် အစ္စရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုပိုင် လောင်စာဆီတင်သင်္ဘောတစ်စင်း တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက် အီရန်နိုင်ငံအား အမေရိကန်က အပြစ်တင်လိုက်ပြီး ၊ မကြာမီကာလအတွင်း “ သင့်လျော်တဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု” လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။
အစ္စရေးဘီလီယံနာသူဌေးကြီး Eyal Ofer ပိုင်ဆိုင်သော လန်ဒန်အခြေစိုက် Zodiac Maritime သင်္ဘောကုမ္ပဏီက သောကြာနေ့တွင် ပြောကြားရာ၌ ၎င်းတို့၏ Mercer Street လောင်စာဆီတင်သင်္ဘောကြီးသည် ဇူလိုင် ၂၉ ရက်က အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်း၌ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး သင်္ဘောသား နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ဆိုသည်။
“ ရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရ အပြစ်မဲ့တဲ့လူ နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို အီရန်က လုပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ် ၊ ဒေသတွင်းမှာ အသေအပျောက်ပမာဏမြင့်မားစေတဲ့ တစ်လမ်းသွား ဖောက်ခွဲရေး မောင်းသူမဲ့ဒရုန်းကို အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ ” ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီဘလင်ကန်၏ ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ နောက်လုပ်မယ့် အဆင့်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူ လုပ်ကိုင်သွားဖို့ စဉ်းစားနေပါတယ် ၊ သင့်လျော်တဲ့ လက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု လုပ်သွားဖို့ ဒေသတွင်းက အစိုးရတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေပါတယ် ၊ သိပ်မကြာခင် လာပါလိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ လောင်စာဆီတင်သင်္ဘောတိုက်ခိုက်မှုနောက်ကွယ်တွင် အီရန်နိုင်ငံက ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်း အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နာ့ဖ်တာလီဘန်းနက် (Naftali Bennett) က ယင်းနေ့အစောပိုင်းတွင် စွပ်စွဲပြောကြားထားသည်။ “ ကျွန်တော် လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြေညာပါတယ် ၊ အဲဒီသင်္ဘောကို အီရန်က တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ” ဟု အစ္စရေးအစိုးရအဖွဲ့ တစ်ပတ်တာပုံမှန် အစည်းအဝေး အဖွင့်မှာပင် ဘန်းနက် က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Saeed Khatibzadeh က အစ္စရေး၏ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများကို ပယ်ချလိုက်ပြီး ၊ အီရန်က တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဆိုခြင်းမှာ “အခြေအမြစ်မရှိကြောင်း” တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
WASHINGTON, Aug. 1 (Xinhua) — The United States on Sunday blamed Iran for the attack against an oil tanker managed by an Israeli-owned company in the north Arabian Sea, saying “an appropriate response” is forthcoming.
Inapress conference on Sunday, Iranian Foreign Ministry spokesman Saeed Khatibzadeh dismissed the Israeli allegations that Iran conducted the attack as “baseless.” Enditem
U.S. Secretary of State Antony Blinken attendsapress conference with Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah (not seen in the picture) in Kuwait City, Kuwait, July 29, 2021.
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ COVID-19 လူနာအရေအတွက် ၆၀၀,၀၀၀ ကျော် ရှိလာ ၊ တင်းကျပ်သောကန့်သတ်ချက်များ ထပ်တိုး